ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
တိုင်းတာရေးလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
Pile လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
Soil Test လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း
ရက်စွဲ : 05-07-2020
လျှောက်လိုသည့် အမျိုးအစား *
-- ရွေးရန် --ကမာရွတ်ကျောက်တံတားကြည့်မြင်တိုင်စမ်းချောင်းဆိပ်ကမ်းဆိပ်ကြီးခနောင်တိုတာမွေတောင်ဥက္ကလာပဒဂုံဒဂုံဆိပ်ကမ်းဒဂုံတောင်ဒဂုံမြောက်ဒဂုံအရှေ့ဒလဒေါပုံပန်းဘဲတန်းပုဇွန်တောင်ဗဟန်းဗိုလ်တထောင်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မင်္ဂလာဒုံမရမ်းကုန်းမြောက်ဥက္ကလာပမှော်ဘီရန်ကင်းရွှေပြည်သာလမ်းမတော်လသာလှိုင်လှိုင်သာယာလှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်သင်္ဃန်းကျွန်းသန်လျင်သာကေတအင်းစိန်အလုံ
-- ရွေးရန် --တဲပျဉ်အုတ်ညှပ် (Brick Nogging)RC/Steel StructureSteel Structureသွပ်မိုး/ပျဉ်ကာသစ်သားRCမြေကွက်လပ်ဆောက်လုပ်ဆဲလမ်းဘေးဆိုင်ခန်းအစိုးရအဆောက်အအုံကွန်ဒိုအပန်းဖြေဥယျာဉ်ဗလီဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းဓမ္မာရုံစာကြည့််တိုက်စာသင်ကျောင်းအားကစားကွင်း​စေတီမွတ်စလင်ဘာသာရေးကျောင်းသီလရှင်ကျောင်းဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အအုံဘုရားတရုတ်ဘုံကျောင်းဌဝရဆိုင်ခန်းဂိုဒေါင်
-- ရွေးရန် --မြေပိုင်မြေဂရန်မြေမြေငှားဂရန်(L) မြေငှားဂရန်သာသနာမြေအစိုးရမြေသိမ် ဂရန်မြေလမ်းမြေဂရန်သက်ကုန်(L) မြေငှားဂရန်(အိမ်ယာမြေ)နှစ် (၆၀) မြေငှားဂရန်ဂရန်မြေ R.S.D.Oဥယျာဉ်အမွေဆက်ခံ(၁) နှစ်ယာယီလိုင်စင်L (R.S.D.O)မြေငှါးဂရန်(ဂရန်သက်ကုန်)လ/န(၃.ခ)LစကွာတာမြေHအိုးအိမ်မှလွှဲ​ပြာင်း​​မြေမြို့ပြ-မြေစီမံL ဂရန်မြေစည်ပင်ပိုင်မြေ(၃) နှစ်ယာယီလိုင်စင်စက်မှုလက်မှုမြေနှစ် (၆၀) စက်မှုမြေငှားဂရန်BH လိုင်စင်မြေB-မြေ လ/န ၃ခR-2R-3Aလိုင်စင်မြေB-လ/န ၃၉H/လ/န ၃၉လ/န ၃၉ ရပြီး(က) ကင်းလွတ်ခွင့်ရသောမြေ(ဝ) ဝေငှခြင်းခံရသောမြေ(၅) နှစ်ယာယီမြေ'အ' အစိုးရB-လ/န ၃ခမြူနီစီပါယ်သို့လွှဲအပ်ပြီးမြေရေဝန်သို့လွှဲအပ်ပြီးမြေမီးရထားမြေပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနပိုင်မြေအစိုးရမြေလပ်နှစ်ခြင်းပေါက်မြေငှားဂရန်တပ်မြေနှစ်ချင်းမြေငှားဂရန်မြေငှားဂရန် သုံးလပါတ်(၁၅) နှစ်မြေငှားဂရန်ခေတ္တနေထိုင်ခွင့်ခေတ္တစိုက်ပျိုးခွင့်စပါးလှန်းရန်အတွက်လိုင်စင်မြေသာသနာမြေ ဂရန်ရှိကျူးလွန်ခြင်းမြေချပါမစ်ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာဏမြေသာသာနာ ဂရံဂရန်ရှိ မြေပိုင်မြေလျော်ကြေးပေး၍ သိမ်းယူခြင်းအထူးဂရန်နှစ်တိုမြေငှားဂရန်ခွဲဝေမူလျှော်ကြေးငွေလျှော်ကြေးပေး၍သိမ်းယူခြင်းမြူနီစီပါယ်ဗဒ္ဓသိမ်အပြီးအပိုင်စွန့်လွှတ်ခြင်းစာချုပ်H (၃)နှစ်လိုင်စင်၃(ခ) အိမ်ယာမြေPermitပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနသို့လွှဲအပ်ပြီးမြေဂရန်ခွဲပေးဂရန်ပေးပြီးကျန်သုဿန်မြေB-မြေပိုင်မြေ(လ/န ၃၉)မခွဲမစိတ်ရသေးသောအနောက်ဘက်ခြမ်း (12 1 /2'×50)အရောင်း'ရာသက်ပန်မြေငှားဂရန်၃(ခ) ရပြီးက-မြေ၃(ခ)ရပြီးအခွန်လွတ်ဂရန်မြေပြည်သူလုပ်ငန်းဌာနသို့ လွှဲအပ်ပြီးမြေကန်တိုမင်ရာသက်ပန်မြေငှားဂ၇န်လက်ကျံမြေA-ရွာမြေG ဂရန်ရွာမြေရုံးတွင်းအမိန့်စွန့်လွှတ်+အမှားပြင်နှစ် (၉၀) မြေငှားဂရန်B-မြေပိုင်မြေCဂရန်ဖျက်သိမ်းသည်C မြေပိုင်မြေအိမ်နှင့်မြေတစ်ဝက်လ/န အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရုံးDeelaration deedGNHBအိမ်ယာမြေပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနပိုင်သီးသန့်ထားသောမြေA-ရွာမြေ(အိမ်ယာမြေ)B-လ/န ၉၉ချောင်းနှစ်တို မြေငှားဂရန်A-စကွာတာမြေGမြေG ၃/ခပေးB-အိမ်ယာမြေလ/နB-လ/နB 'G' ၃(ခ)G ၃/ခရပြီးပါမစ်မြေL-မြေငှားဂရန်L လ/န-၃၉B၊ ၃(ခ) ရပြီးမြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစိုးရလမ်းမြေပြည်သူ့အကျိုးငှားအခမဲ့မြေဂရန်နှစ် (၃၀) မြေငှားဂရန်EL / လန ၃(ခ)H / လန ၃(ခ)L/လ.န.န.(ခ)(၂၅) နှစ်မြေငှားဂရန်ရေဝန်ပိုင်မြေဦးပိုင်ခွဲ၍လျော့(၈၇) နှစ်မြေငှားဂရန်ရာသက်ပန်မြငှားဂရန်(၈၆) နှစ်မြေငှားဂရန်L (ဂရန်သက်ကုန်)B မြေအိမ်ပိုဆောက်လုပ်ခြင်း'က' မြေ'အ' မြေOသင်္ဂြိုင်း/သုဿန်မြေ'က' လ/န ၃ခရပြီးရမ/လC လ/န-၃၉L /၃(ခ)(၅) နှစ်မြေငှားဂရန်L-လ/န-၃၉H၃(ခ)က/၃/ခက/၃/က'က' လ/န ၃၉L / လန၃(ခ)C လ/န ၃(ခ)အခွန်လွတ်ဗဒ္ဓသိမ်ဂရန်စက်မှုမြေReligious Landနှစ် (၆၀) ‌မြေငှားဂရန်(စီမံချက်ဂရန်)ပညာ‌ရေး‌မြေယာယီ‌မြေပညာ‌ရေး‌မြေဂရန်နှစ် ၆၀ ဂရန်နှစ် ၆၀ ဂရန်မြေသာသနာမြေ ဂရန်မရှိနှစ် (၉၀) ဂရန်****တယကမြူနီစီပါယ်သို့မြေငှားဂရန်မြေနုကျွန်း(၂၈) နှစ် (၉) လ မြေငှားဂရန်မစိုက်ပျိုးမြေခေတ္တအမိန့်‌မြေစက်ရုံမြေ------Bလ/န-၃၉(မြေပိုင်မြေ)စက်‌မြေသတ်မှတ်အခွန်လွတ်သာသနာမြေအခွန်လွတ်သာသနာဂရန်နှစ် (၆၀) မြေငှားစာချုပ်လိုင်စင်သက်ကုန်၃နှစ်ယာယီအသုံးပြုခွင့်မြေပိုင်မြေ(လ/န-၃၉)(၈) နှစ်ဂရန်(က)မြေ၊လ/န-၃၉ ရပြီး၃၉/က'ဝ' မြေ လ/န(၃၉)ရပြီးO လ/ယ-၃၀ ရရှိပြီးရန်ကုန်စည်ပင်သာယာသို့လွှဲအပ်ပြီးမြေရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသောမြေ၃၄အယ်လ်၆၀ကြိုတင်ပေးပို့မိတ္တူပြန်တမ်းB-၃က ရပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသောမြေ၊ အစိုးရမြေRRမြေပိုင်ဂရန်နိုင်ငံတော်ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေမြေပိုင်မြေ လ/န.၃(ခ)မြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေ)မြေပိုင်မြေ(B)အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်B(လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု မှ အပ အခြား ကိစ္စအသုံးပြု ရန်)မြေပိုင်မြေ၊လ/န-၃(ခ) ရပြီးB-မြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ (အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်ထုတ်)ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမြေပိုင်မြေ လ/န ၃၉ရပြီး အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်B-မြေ ၃(ခ)ရပြီးနှစ် ၂၅မြေငှားဂရန်Bမြေပိုင်-၃က ရပြီး(B)လ/န-၃၉ ဘိုးဘွားပိုင် အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်ထုတ်ပေးB-လ/န -၃၉ ဘိုးဘွားပိုင်မြေမြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)B၊မြေပိုင်မြေ၊လ/န-၃၉(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)B-မြေ လ/န ၃၉B၊မြေပိုင်မြေ(အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအလုပ်ရုံမြေသတ်မှတ်)က-မြေ၃(က)ရပြီးB-လ/န၃၉(စက်မြေရပြီး)မြေပိုင် လ/န၃(ခ) ရပြီးမြေပိုင်မြေ လန၃(ခ)မြေပိုင်မြေ၊လ/န-၃၉(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)L အနှစ်(၃၀) ဂရန်နှစ်(၃၀) မြေငှားဂရန်B ၃ခရပြီး မြေပိုင်မြေB-မြေပိုင်မြေ (၃/ခ သတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေရပြီး)Bမြေပိုင်-၃(ခ) ထုတ်ပေးမြေပိုင်မြေ ၃(ခ)ထုတ်ပေးB-လ/န ၃၉ ရပြီး(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ၊လ/န(၃၉) (မြို့မြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ( မြို့မြေသတ်မှတ်)L,GB၊မြေပိုင်မြေ၊လ/န ၃(ခ) ရပြီးနှစ် (၃၀) စက်မှု/စီးပွားမြေငှားဂရန်B-အိမ်ယာမြေရရှိပြီးBမြေပိုင်မြေ၊လ/န၃၉(အိမ်ယာမြေထုတ်ပေး)B၊(မြို့မြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ-B(စိုက်ပျိုးမူမှအပအခြားအတွက်အသုံးပြု ရန်သတ်မှတ်)B၊လ/န-၃၉(အိမ်ယာမြေ)မြေပိုင်မြေ လ/န.၃(ခ)၊အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်မြေပိုင်မြေပိုင်မြေ ၃(ခ) ပေးB-မြေပိုင်မြေလ/န၃၉စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်မြေပိုင်မြေ (အိမ်ယာမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)B-(မြို့မြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ လ/န၃(ခ) ပေးB-လ/န ၃ခရပြီးမြေပိုင်၊လန-၃(ခ)မြေပိုင်မြေ၊၃(ခ)ရပြီးမြေပိုင်မြေ (အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)B(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)A-ရွာမြေ ၃(က) ရပြီးB-မြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်ထုတ်ပေး)A ၃(ခ)မြေပိုင်မြေ၊လ/န-(၃၉) ရပြီးB၊ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ၃(ခ) ရပြီးမြေပိုင်မြေ၊လ/န-၃၉(အိမ်ယာမြေ)မြေပိုင်ဂရံမြေ၂၅နှစ် မြေငှားစာချုပ်မြေပိုင်မြေ၊၃(က) ရပြီးနှစ်(၃၀) မြေငှားစာချုပ်( ဂရန်)B၊မြေပိုင်မြေ၊ လ/န(၃၉) အိမ်ယာမြေ(၁) ယာယီ မြေအသုံးပြုခွင့်B-မြေပိုင်(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ-(B)အိမ်ယာမြေရပြီးB၊လ/န-၃၉ရပြီးဥယျာဉ်မြေ (B)မြေပိုင်မြေ၊၃(ခ) ရပြီးB-မြေလ/န(၃-ခ)အိမ်ယာမြေG (အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)B-မြေပိုင် လ/န ၃(ခ)ရပြီးB၊မြေပိုင်မြေ၊အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်၊(လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု မှ အပ အခြား ကိစ္စအသုံးပြု ရန်)(L)-နှစ်(၃၀)ဂရန် RSDO-68(19.1.51)/1950-51(18.1.18)B-မြေပိုင်B၊လ/န-၃၉(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ် )က-Lရွာမြေ ၃(က) ရပြီးမြေပိုင်မြေ၊ကြိုးစက်မြေLအနှစ်(၃၀)ဂရန် R.S.D.O -68(19.1.51)/1950-51(18.1.81မြေပိုင်မြေ-လ/န ၃(ခ) ရပြီးမြေပိုင်မြေ၊၃(ခ)B၊မြေပိုင်မြေ(လ/န-၃၉)စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်မြေပိုင်မြေ၊၃(ခ) အိမ်ယာမြေB-လ/န -၃၉ ဘိုးဘွားပိုင်၊အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်မြေပိုင်မြေ(အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအလုပ်ရုံမြေသတ်မှတ်)နှစ်(၂၅) ဂရန်B-မြေပိုင်မြေ(လ/န ၃၉)အိမ်ယာမြေသတ်မှတ် ဝန်ခံချက်ထုတ်ပေးB၊မြေပိုင်မြေ၊လ/န-၃၉ရပြီး'က' ၃(ခ) ရပြီးB-မြေပိုင်(မြို့မြေသတ်မှတ်)သာသနာ့ဂရန်B၊လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှ အပအခြားကိစ္စအတွက် အသုံးပြုရန်ဂရန်ရှိ သာသနာ့မြေ၃(ခ) -အိမ်ယာမြေပေးL-မြေငှားဂရန် ၃(ခ) အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်သံပုံးစက်မြေ လ/န-၃၉ ရပြီး(L) မြေငှားL(၃၀) မြေငှားဂရန်B-မြေပိုင်မြေအိမ်ယာမြေရပြီးရွာမြေ(A ) ၊လ/န-၃(ခ) ရပြီးမြေပိုင်မြေ(B)အိမ်ယာမြေB-ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ၊၃(ခ) ရပြီးB-မြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေ)မြေပိုင်မြေ၊ကြိုးစက်မြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)နှစ် (၃၀) ဂရန်(သက်ကုန်)စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမြေပိုင်မြေ (အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်ထုတ်ပေး)မြေပိုင်မြေ(စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)B-၃(ခ) အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်B-လ/န -၃၉ ဘိုးဘွားပိုင်(အိမ်ယာမြေ)မြေပိုင်မြေ၊B၊လ/န ၃၉ရပြီး( အိမ်ယာမြေ)B-လ/န-၃၉(မြေပိုင်မြေ)(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ(မြို့မြေ)မြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေ ၃(ခ) ရပြီး)ရွာမြေ(A ) ၊၃(က)ရပြီးB-မြေ ၃(ခ)ပေးB-မြေပိုင် လ/န(၃-ခ)အိမ်ယာမြေB၊မြေပိုင်မြေ(လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု မှ အပ အခြား ကိစ္စအသုံးပြု ရန်)B-မြေပိုင် ၃(က)ရပြီးမြေပိုင် လ/န(၃၉)B-လ/န ၃၉(ဘိုးဘွားပိုင်မြေ)B၊မြေပိုင်မြေ၊လ/န-၃၉(လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု မှ အပ အခြား ကိစ္စအသုံးပြု ရန်)B-မြေပိုင်(လ/န ၃၉)Bမြေ အိမ်ယာမြေ ၃(ခ) အဖြစ်အသုံးပြုB လ/န ၃(ခ) အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်စစ်တပ်မြေရွာမြေ ၃(က)ပေးB ၊ အိမ်ယာမြေမြေပိုင်မြေ(ဘီ-လ/န-၃၉)B ဦးပိုင်ခွဲL အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်(C) မြေပိုင်မြေမ/လ ၃(ခ)ရပြီးL(လ/န၃၉ရပြီး)B-မြေပိုင်မြေ ၊ လ/န-၃၉ (လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှအပ အခြားကိစ္စအတွက် အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်သည်။)B၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးမှုမှအပအခြားကိစ္စအသုံးပြုရန် (အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)B-မြေ လ/န ၃(ခ)နှစ်(၃၀) ဂရန်B/လ.န ၃၉ မြေပိုင်မြေရွာမြေ(A) လ/ဝ. ၃(ခ) ရပြီးB မြေပိုင်၃(ခ)ရပြီးက၊ ၃(က)ရပြီးမြေပိုင်၊၃(ခ)ပေးR2,R3,R4 ဝ (မြေ)C ၃(က) ရပြီးရွာမြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်ပြီး)က လ/န ၃၉ ၃(ခ) အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်၃(က) ရပြီးG ၊ ၃(က) ရပြီးB-မြေပိုင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှ အပအခြားကိစ္စအတွက်အသုံးပြုရန်မြေပိုင်မြေ၊ Bလ/န-(၃၉) ရပြီး(အိမ်ယာမြေ)မြေပိုင်-၃(ခ)ရပြီးRR ၊ ကR3 ၊ဝ(က)မြေ၊ GRR လ/န-၃၉ ရပြီးG လ/န-၃၉ ရပြီးR3 လ/န-၃၉ ရပြီးL၊ နှစ် (၆၀) မြေငှားဂရန်မြေပိုင်မြေ ၊ လ/န ၃(ခ) ထုတ်​ပေးB-လ/န ၃ (ခ)G,L ၃(ခ)ရပြီးမြေပိုင်မြေ၊လ/န-(၃၉) အိမ်ယာမြေရပြီးဖြစ်သောဘိုးဘွားပိုင်မြေက လ/န ၃၉ စက်မှုလက်မူမြေG A ၃(က)ရပြီးC မြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)'ဝ'မြေ(R3,R4)'ဝ'မြေ(R5)မြေပိုင်မြေ၊B၊လ/န-(၃၉) အိမ်ယာမြေရပြီးဖြစ်သောဘိုးဘွားပိုင်မြေB လ/န (၃၉) ရပြီးB လ/န.၃၉(စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)B(လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု မှ အပ အခြား ကိစ္စအသုံးပြု ရန်)(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)B-မြေပိုင်မြေ(လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှ အပအခြားကိစ္စအတွက်အသုံးပြုရန်)(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)ဂရန်မရှိသော သာသနာ့အစိုးရမြေB-မြေပိုင်မြေ ၊ (လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှအပ အခြားကိစ္စအတွက် အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်သည်။)မြေပိုင်မြေ-B (မြို့မြေသတ်မှတ်)B၊မြေပိုင်မြေ၊ လ/န.၃၉(စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)B-လ/န ၃၉(အိမ်ယာမြေပေး)A ၃(ခ)အိမ်ယာမြေမြေပိုင်မြေ-B(အိမ်ယာမြေသတ်မှက်ဝန်ခံချက်ထုတ်ပေး)မြေပိုင်ဂရံမြေ(အိမ်ယာမြေ)B-မြေပိုင်မြေ ၃(ခ) အိမ်ယာမြေB-လ/န -၃၉ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်ထုတ်ပေး)B,GL,G(က)မြေB (အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်ထုတ်ပေး)လ/န-၃၉ (အစိုးရဆေးချက်ရုံဆောက်လုပ်ရန်)C လ/န-၃၉(စိုက်ပျိုးရေးသုတေသန စခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)(B)မြေပိုင်၊မြို့မြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်G ကမြေ လ/န-၃(ခ)ရပြီးR2,R3 လ/န ၃၉ ရပြီးL-အငှားဂရန် ၃(ခ)ပေးL-အငှားဂရန် ၃(ခ)ပေးအိမ်ယာပေးB (သာသနာမြေသတ်မှတ်)L-အငှားဂရန် ၃(ခ)ပေးအိမ်ယာမြေပေးမြေပိုင်မြေ၊ လ/န.၃(ခ)၊ B အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်B-မြေပိုင်မြေ(လ/န ၃၉)အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်မြေပိုင်( အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)B-လ/န ၃ (ခ)အိမ်ယာမြေG‘A’'ဝ'မြေ ၃(က)ရပြီးလ/န(၃ခ)ရပြီးG (အိမ်ယာမြေရပြီး)L(လ/န၃၉ရပြီး)GB/လ-န ၃၉ ဘိုးဘွားပိုင် (အိမ်ယာမြေ)B/လန ၃၉ မြို့မြေအဖြစ်အသုံးပြုရနန်သတ်မှတ်က(မြေ)H,G,LG လ/န-၃(ခ) ရပြီးG ကမြေ လ/န-၃၉ရပြီးမြေပိုင်မြေ လ/န (၃၉) (အိမ်ယာမြေရရှိပြီး)B-လ/န ၃၉ အိမ်ယာမြေB/လန-၃၉(မြို့မြေသတ်မှတ်)B-လ/န(မြို့မြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)O လ/ယ-၃၀(က)ရရှိပြီး၊R2 R3B-လ/န ၃၉(မြို့မြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)L(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်ဝန်ခံချက်ထုတ်ပေး)R2 ၊(ဝ)မြေမြေပိုင်မြေ(စက်မြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်ဂရံမြေ(အိမ်ရာမြေ)B-လ/န၃၉ (စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ(မြို့မြေအဖြစ်သတ်မှတ်)(အိမ်ယာမြေ)C လ/န.၃၉ (စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ(B)(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ ၃ခ သတ်မှတ်R-1'ဝ' မြေ လ/ယ (၃၀)ရပြီးဥယျာဉ်မြေ (B) ၃(က)ရပြီးမြေပိုင်မြေ၊လ/န-(၃၉) ရပြီး(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)လ/န ၃၉ (အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)က (ကြိုးစက်မြေ)'ဝ'မြေ လ/န ၃၉ (အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)G(က)မြေ ၃(က)ရပြီးလယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှအပအခြားကိစ္စအတွက်အသုံးပြုရန်မြေပိုင်မြေ-B(အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်ထုတ်ပေး)B၊မြေပိုင်မြေ(မြို့မြေအဖြစ်သတ်မှတ်)(၁) ယာယီ မြေအသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်B-လ/န (အိမ်ယာမြေ)ဂရန်မြေ(သက်ကုန်)O လ/ယ-၃၀(က)ရရှိပြီးR2,R3(မွေးမြူရေးနှင့်နှစ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပျိုးမြေ)B-မြေ လ/န (၃၉)အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်B,G ၃(ခ)ရပြီးB (မြေပိုင်မြေ) လ/န၃၉၊ (လယ်ယာစိုက်ပျိုးမူမှအပအခြားကိစ္စအသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ( မြို့မြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)လ/န ၃၉ ရပြီး(ဆေးဘက်ဝင်သစ်ခွနှင့်အခြားသီးနှံစိုက်ပျိုးရေအသုံးပြုရန်)B ​မြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)License Vide Rev, Corres no V .C.10/04/05Lieense Vide Rev Corres:no 5.J-3 of 1896/1897 ,5.J.19 of 97/98 & V.C 18 of 1904-05B (လ/န-၃၉) မြေပိုင်မြေ၃၀(က)ရပြီး(ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးမြေ)ပြောင်းလွှဲခြင်းမြေပိုင်မြေ (အိမ်ယာမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်)B၊လ/န-၃၉( အိမ်ယာမြေအဖြစ်သုံးပြုရန်)G၊'က'B ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ၃(ခ)ရပြီးမြေပိုင်မြေ( အိမ်ယာမြေမြို့မြေအဖြစ်သတ်မှတ်)A-ရွာမြေ လ/န (၃ခ) ရပြီးမြေပိုင်မြေ( ကြိုးဆက်မြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ( ကြိုးစက်မြေသတ်မှတ်)B-လ/န ၃၉၊ ဘိုးဘွားပိုင်၊အိမ်ယာမြေB​မြေပိုင်မြေ၊လယ်ယာစိုက်ပျိုးမူမှအပ အခြားကိစ္စအတွက် အသုံးပြုရန်B-လ/န ၃၉ (မြို့မြေသတ်မှတ်)A-ရွာမြေ လ/န ၃၉(အိမ်ယာမြေ)မြေပိုင်မြေ B( လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှအပ အခြားကိစ္စအတွက် အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်B ၊လ/န -၃၉ ၊ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ( အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်ထုတ်ပေး)G မြေပိုင်မြေ လ/န၃(ခ)ရပြီးB 'G' လ/န၃(ခ)ရပြီးA-၃/ခ၊ အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်ကA-ရွာမြေ လ/န(၃၉)အုတ်ဖုတ်မြေ ၃(က)ရပြီးG,Bမြေပိုင်မြေ ( လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှ အပ အခြားနည်းအသုံးပြုရန်)ပါမစ်လ/န (၃၉) ၃ (ခ)ရပြီးမြေပိုင်မြေ လန-၃၉( လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှအပ အခြားကိစ္စအတွက် အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်မြေပိုင်မြေ (စက်ရုံမြေ အဖြစ်အသုံးပြု)ပြည်သူပိုင်ကျောင်းB (တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသုသေသန ဗိမာန်နှင့် အတတ်သင်သိပ္ပံမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်)မြေပိုင်မြေ လ/န-၃၉ ရပြီး (တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသုသေသန ဗိမာန်နှင့် အတတ်သင်သိပ္ပံမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်)မြေပိုင်မြေစက်ရုံမြေအဖြစ်အသုံးပြုဗဒ္ဓသိမ်မြေ(၃)နှစ်ယာယီလိုင်စင်မြေမြေငှားဂရန် (လ/န-၃၉)B-မြေပိုင်မြေ (စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ် )B-လ/န-၃၉ (အိမ်ယာမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်)L-နှစ် (၃၀) ဂရန်B၊လ/န-၃၉၊မြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ် )A ၃(ခ)ရပြီးG(က)မြေ ၃(ခ)ရပြီးBလ/န၃(ခ)ပေးပြီးR3 'O' လ/န-၃၉ ရပြီးမြေပိုင်မြေ လ/န(၃၉-ခ)B-လ/န ၃၉ (အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)G‘L’B(လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု မှ အပ အခြား ကိစ္စအတွက် အသုံးပြု ရန်)'G'(က)မြေ ၃(ခ)ရပြီး'G'(က)မြေB လ/န ၃၉ (အိမ်ယာမြေနှင့် အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ရန်ခွင့်ပြု)'က' H Gဘီ-လ/န(အိမ်ယာမြေ)B၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ'ဝ'မြေ(R3,R4)၃(က)ရပြီးမြေပိုင်မြေ(B)(အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေး)ဂရန်မရှိ သာသနာမြေရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ လမ်းမြေဘီ-မြေပိုင်မြေ(၃/ခသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ လ/န-၃၉ စက်မှုလက်မှုမြေ(၃)နှစ်ယာယီမြေ အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်မြေငှားစာချုပ်၃(က)ရပြီး 'B'Gမြေပိုင်မြေ၊လ/န-၃၉ ရပြီး(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)မြေပိုင် လ/န-၃(ခ)B-အိမ်ယာမြေ ၃(ခ)ထုတ်ပေးအစိုးရ (ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်း)သိမ်မြေB မြေ လ/န(၃၉)ရပြီးမြေပိုင်မြေ လ/န-၃၉ (အိမ်တွင်းစက်မှု့လက်မှု့အလုပ်ရုံမြေသတ်မှတ်)က (အိမ်ယာမြေ)B-လ/န-၃၉ (စက်ရုံမြေသတ်မှတ်)အခွန်လွတ်'၃'နှစ်သာသနာ့လိုင်စင်B-လ/န ၃၉ (ရွာမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်)အခွန်လွတ်သိမ်မြေB လ/န ၃၉ (လ/န ဝန်ကြီးစာအမှတ် ၉၁-စျ က ၅၇ နေ့စွဲ ၈.၆.၅၉ အရ သံရေကြိုရုံဆောက်ရန်သတ်မှတ်)B၊ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေပေး)(၃)နှစ်ယာယီမြေB -မြေပိုင်မြေ ၃(ခ)ပေးB-မြေပိုင်မြေစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်မြေပိုင်မြေ(လ/န-၃၉) (အိမ်ယာမြေ)'B' G(မှော်ဘီမြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၏လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ-၃(ခ)အရလယ်ယာမြေဟူသောစကားရပ်တွင် အကျုံးမဝင်ကြောင်းဝန်ခံချက်လက်မှတ် ဦးလူမော်မှ ရရှိ)မြေပိုင်မြေ(R1,R2,R3,F)'က' R3'ဝ'လ/န(၃၉)'က' R2B. ၃(ခ) ရပြီး (အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)B-လ/န ၃၉ ရပြီး၊မြေပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ၊ လ/န(၃၉)၊ အုတ်ဖုတ်မြေသတ်မှတ်B၊မြေပိုင်မြေ၊လ/န-၃၉ရပြီး(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)G(က)မြေG 'B' ၃(က)ရပြီးA-ရွာမြေ၊ လ/န (၃၉) ရပြီး'အ' မ/လ 'G'A-ရွာမြေ ၃(ခ)ပေး'o' R2,R3မြေပိုင်မြေ၊အိမ်ယာမြေ၊၃ (ခ) ထုတ်ပေးနှစ်ခြင်းမြေငှားဂရန်က 'G' ၃(က)ရပြီးမြေငှားR2 R3စာအမှတ် မတ-၁၁၇၅/၈၆ (ထွေ)အရမြေသိမ်းပုဒ္မ-၆ ဆောင်ရွက်ထားသည်။'က'မြေ R3(၃-ခ)ရပြီးB၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ(F)မြေပိုင်မြေ(R1,F)B လ/န-၃၉ အိမ်ယာမြေသတ်မှတ် ဝန်ခံချက်ထုတ်ပေးဝိုင်စီဒီစီမြေB (တိရစ္ဆာန်ဆေးကုအတတ်သင်သိပ္ပံနှင့် သုသေသနအ​ဆောက်အဦးမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်)မြေပိုင်မြေ လ/န ၃(ခ) အိမ်ယာမြေ'ဝ'မြေ (R5) ၃(က)ရပြီးH(အိမ်ယာမြေ သတ်မှတ်)R2,R3,'o'၃(က)ရပြီး'ဝ'R3 လ/န(၃၉)ရပြီးR3'က'လ/န(၃၉)ရပြီးR B ၃(ခ)ရပြီး'ဝ' လ/န(၃၉)ရပြီး'က' မြေ လ/န(၃၉)ရပြီးဝ' လ/န(၃၉)ရပြီး (စိုက်ပျိုးမြေနှင့် စက်ရုံမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်)'က' မြေ လ/န(၃၉)ရပြီး (စိုက်ပျိုးမြေနှင့် စက်ရုံမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်)'ဝ' မြေ လ/န(၃၉)ရပြီး (စိုက်ပျိုးမြေနှင့် စက်ရုံမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်)(၃)နှစ်မြေငှားဂရန်မြေပိုင်မြေ၊B( မြို့မြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ(လ/န-၃၉) ရပြီးမြေပိုင်မြေ အိမ်ယာမြေ ၃(က)ထုတ်ပေးအငှားဂရန်မြေပိုင်မြေ လ/န.၃(ခ) ရပြီးB မြေပိုင်မြေ (အုဌ်ဖုတ်မြေ သတ်မှတ်)မြေပိုင်(အိမ်ယာမြေ)B-၃-ခရပြီး မြေပိုင်မြေR2 R3 'က'မြေL R3L,G(၃-ခရပြီး)R2 R3 'o'မြေR2 R3 မ/လB၊ လ/န ၃၉ သံရေကြိုရုံဆောက်ရန်သတ်မှတ်G မ/လ(၃) နှစ်မြေငှားဂရန်B၊ လ/န -၃၉ (လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးမှုမှ အပ အခြားကိစ္စအတွက် အသုံးပြုရန် )က၊ မ/လ လ/န(၃၉)ရပြီး Gက 'G'တရားကျင့်ထုံးဥပဒေ ၂၁ နည်းဥပဒေ ၉၄ အရG မြေ(၃/ခ)ရပြီးအခွန်လွတ်သာသနာဂရန်မြေG က ၃(က)ရပြီးG က,H-၃(ခ)ရပြီး။L မြေငှားဂရန်၊ ၃(ခ) အိမ်ယာမြေပေးB မြေပိုင်မြေ(မြို့မြေအဖြစ်သတ်မှတ်)A (အိမ်ယာမြေ)မြေပိုင်မြေ (စက်ရုံမြေ)အယ်လ်ဂရန်(‌မြေငှားစာချုပ်)မ/လR2မြေC-ရွာမြေ(လန-၃၉ရပြီး)(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)၃နှစ်ယာယီလိုင်စင်မြေမြေပိုင်မြေ (စက်မှု့လက်မှု့အလုပ်ရုံမြေသတ်မှတ်)A-ရွာမြေ ၃(ခ) အိမ်ယာမြေပေးR2,R3 လ/န ၃၉ ရပြီး(စိုက်ပျိုးမွေမြူရေးမြေ)B မြေပိုင်မြေ (မြို့မြေအဖြစ်သတ်မှတ်) (အိမ်ယာမြေ)B-မြေပိုင်မြေ၃/ခ (အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)နှစ် (၆၀)ဂရံအစိုးရမြေပိုင်မြေ(လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးမှုမှအပအခြားကိစ္စများအတွက်အသုံးပြုရန် )အိမ်ယာမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်B လ/န-၃၉ (ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးဌာန အဆောက်အဦးမြေသတ်မှတ်)မြေပိုင်မြေ လ/န(၃၉)အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်နှစ်(၆၀)မ​ြေငှားစာချုပ်B လ/န.၃(ခ)(အိမ်ယာမြေ)G၊ 'ရ'Aရွာမြေ(၃/ခ ရပြီး)(၂)နှစ်မြေငှားဂရန်H,G ၃(ခ)ရပြီးB-၃(က)'A' G ၃(က)ရပြီးအ/၃(ခ)ရပြီး။၃(က)မြေပိုင်မြေ လ/န(၃၉)၊ လ/န(၃-ခ)'B' R3 မြေနှစ်(၉ဝ)ဂရန် (သက်ကုန်)G 'အ' မလ ၃(က)ရပြီးA ရွာမြေ ၃(က)ဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးB-မြေပိုင်မြေ (လန-၃/ခ ရပြီး)အငှားဂရန်(သက်ကုန်)မြေပိုင်မြေ B လ/န-၃၉ အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးနှစ်(၆ဝ)ဂရန်သက်ကုန်မြေပိုင်မြေ စက်မှုလက်မှုအလုပ်ရုံမြေသတ်မှတ်နှစ်၆၀စက်မှု့လက်မှု့ဂရန်မြေနှစ်(၃၀)စက်မှု မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)C အိမ်ယာမြေရပြီးကမြေ၊R5နှစ်(၆၀) စက်မှုမြေငှားစာချုပ်မြေပိုင်မြေ၊ လ/န(၃၉)၊ စက်မြေသတ်မှတ်မြေပိုင်မြေ၊ လ/န(၃၉)၊ စက်မှုလက်မှုစက်ရုံမြေသတ်မှတ်နှစ်ပေါင်း ၆၀ မြေငှားဂရံR3 'B' လယ်မြေအား အခြားနည်းအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး(ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ရန်မြေနေရာ)ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနပိုင်မြေ(P.W.D)လိုင်စင်B ၃(ခ)ပေးပြီးH လ/န ၃၉ (အိမ်ယာမြေ)(၁)နှစ်ယာယီမြေC ဂရံရှိမြေပိုင် -၃(ခ)သတ်မှတ်R2 လ/န ၃၉ ရပြီး(စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမြေ)L-ကဂရန်သက်ကုန် - ၃(ခ) ရပြီးအခွန်လတ်ဗဒ္ဓသိမ်မြေC မြေပိုင်မြေ ၃(ခ)သတ်မှတ်L လ/န-၃၉(စိုက်ပျိုးရေးသုတေသန စခမ်းမြေအဖြစ် အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)နှစ် (၆၀) မြေငှါးစာချုပ်G 'H' ၃(ခ)ရပြီးနှစ် (၆၀) မြေငှါးဂရန်H မြေငှားလိုင်စင်သက်ကုန်မြေမီးရထားဌာနသို့လွှဲအပ်ပြီး‌မြေR3 L ၃(ခ)ရပြီးသုံးလပါတ် မြေငှားဂရန်B၊၃(ခ)G မ/လ ၃(က)ရပြီးR3 'က' လ/န ၃၉ရပြီး(ဆေးဘက်ဝင်သစ်ခွနှင့်အခြားသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးမြေ)မြေပိုင်မြေ လ/န (၃၉)၊ စက်မှု့လက်မှု့ပညာသင်ကျောင်းမြေသတ်မှတ်C-ရွာမြေC-ရွာမြေ(အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်)ရွာ‌မြေ-၃(ခ)အိမ်ယာ‌မြေ'ဝ'R3 လ/န(၃၉)ရပြီး(ဆေးဘက်ဝင်သစ်ခွနှင့်အခြားသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးမြေ)က မြေ အိမ်ယာမြေရပြီးလ/ယ၊ ၃၀(က)အစိုးရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေက-မြေမြေငှားဂရန် (ဂရန်သက်ကုန်)Government free Grant ForaMosqueH- အုဌ်ဖုတ်မြေသတ်မှတ်မြေပိုင်မြေ လ/န-၃၉ အိမ်ယာမြေဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးလ/န.၃၉(စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစခမ်းမြေအဖြစ်အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်)လ/န-၃၉ (ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး အဆောက်အဦးမြေသတ်မှတ်)သာသနာ့လိုင်စင်P.W.DG အ(ပရိပတ္တိသာသနာ့ဂုဏ်ရည်ကျောင်းမြေနေရာအဖြစ်အသုံးပြုရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ လယ်ယာမြေအားအခြားနည်းအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိ)B လ/န (အိမ်တွင်းစက်မှု့လက်မှု့အလုပ်ရုံမြေသတ်မှတ်)အစိုးရ(နိုင်ငံတော်ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ)G(လ/န-၃၉ ရပြီး စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအဖြစ်အသုံးချရန်မြေ)
အထပ် အသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက် (လျှောက်ထားသူမှ ဖြည့်စွက်ရန်!)